गहभरी आँशु पार्दै यी विवस बाबुले देखाए आफ्नै छोरीको भारतमा खिचिएको यस्तो ग’म्भीर भिडियो ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 4, 2021 AdminLeaveaComment on गहभरी आँशु पार्दै यी विवस बाबुले देखाए आफ्नै छोरीको भारतमा खिचिएको यस्तो ग’म्भीर भिडियो ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
फागुन ८ गते भरतले तुल्सीलाई पिटेको र उक्त भिडियो भरतले नै तुलसीका काकालाई पठाएको पनि परिवारको भनाई छ । र, त्यही फागुन ८ गतेदेखि नै तुल्सी सम्पर्कविहीन भएको जनाईएको छ । यताबाट परिवारले भरतलाई फोन गर्दा उसले तुलसी भागी भन्ने जवाफमात्रै दिएको पनि तुलसीका परिवारका सदस्यहरुले जनाएका छन् ।
हेरौं पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले बोलेको पूरा भिडियो :